Paul Scholes oo sheegay in guuldarradii Man United ay faa’iido u noqon karto macalin Ole Gunnar Solskjær – Gool FM
Paul Scholes oo sheegay in guuldarradii Man United ay faa’iido u noqon karto macalin Ole Gunnar Solskjær
Dajiye January 24, 2020
(Manchester) 24 Jan 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Paul Scholes ayaa sheegay in guuldarradii Red Devils ka soo gaartay naadiga Burnley ay faa’iido u noqon karto macalin Ole Gunnar Solskjær.
Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu soo xigtay hadalada Paul Scholes waxaana ka mid ahaa:
“Waxqabadka kooxda ee kulankii Burnley ayaa laga yaabaa inay u fududeyso Ole Gunnar Solskjær bar-tilmaameedyadiisa suuqa kala iibsiga”.
“Guuldarrada soo gaartay Manchester United waxay ku qasbi doontaa maamulka inay la soo wareegaan ciyaartoy cusub”.
“Tani waxay dhiirogelin u noqon kartaa kooxda si ay u bixiso dhowr milyan oo dheeraad ah, isla markaana ay ula soo saxiixato xiddigo ay kooxda doonayso inay ku darto sida Bruno Fernandes”.
“Solskjær wuxuu u baahan yahay tiro ciyaartoy ah uu qeyb kaga soo dhigto kooxdiisa, qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda ayuu dhaawac soo gaaray, sidaas darteed wuxuu u baahan yahay caawimaad”.
“Kooxda waa inay haatan caawiyaan. waxaan ka baqayaa in isbuucyada soo socda ay koobnaan doonaan xulashooyinka Solskjær, sababa la xiriira in ciyaartoyda dhaawacan aysan soo laaban doonin. iyo inaan la sameyn doonin saxiixyada ciyaartoy cusub”.
Liverpool oo wali la joojin la’ayahay kaddib markii ay guul dirqi ah ka soo heshay Wolverhampton… +SAWIRRO